म प्रधानमन्त्री बन्ने वित्तिकै मुलुक भएमुक्त भयो: प्रधानमन्त्री देउवा (भिडियो सहित) - Nepal’s First News Agency
म प्रधानमन्त्री बन्ने वित्तिकै मुलुक भएमुक्त भयो: प्रधानमन्त्री देउवा (भिडियो सहित)
काठमाडौ., मंसिर २४ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काँग्रेसको सभापति बनाउन पार्टी महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले केपी ओलीजस्ता शासकको डरत्रासबाट मुलुकलाई मुक्त बनाउँदै आगामी निर्वाचनमा काँग्रेसको सरकार बनाउन पनि सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले आफूलाई सभापति बनाउनुपर्ने तर्क समेत गर्नु भयो । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा बोल्दै उहाँले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने वित्तिकै मुलुक भएमुक्त भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बचाउन पनि महाधिवेशनले आफूलाई पुनः सभापतिमा विजयी बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । मुलुकमा अव कुनै पनि किसिमको तानाशाही सरकार नआओस् भन्नका लागि पनि आफू नेतृत्वको काँग्रेस सरकारलाई निरन्तरता दिने गरी काँग्रेस महाधिवेशनले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘एउटा कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छु भने–जुन दिन मेरो सरकार बन्यो । त्यो भन्दा अगाडिको दिन हेर्नुस । कस्तो थियो–डर त्रास । देशभरी कस्तो अवस्था थियो ? र म प्रधानमन्त्री भएको भोलीपल्टै सारा मानिसहरुलाई मुक्ति पाएजस्तो भयो । साना मानिसहरुले ओलीको शासनबाट मुुक्ति पाए । त्यस्तो अवस्था थियो । त्यस्तो अवस्थाबाट अव हाम्रो अगाडि त्यो मुक्ति जो पाएका छौं–त्यसलाई बचाउने हो कि नबचाउने हो ? बचाउने हो । त्यसका लागि यो महाधिवेशनले तय गर्छ । यो महाधिवेशनले डर, त्रासबाट मुक्त समाज, फेरी अव कुनै पनि तानाशाही सरकार नआओस् भन्नका लागि महाधिवेशनले निर्णय गर्नुपर्छ । निर्णय गरेको खण्डमा आउँदो सरकार काँग्रेसको हुन्छ । गाउँदेखि माथिसम्म । त्यो मेरो जिम्मा भयो ।’